कहिले हुन्छ कांग्रेसको महाधिवेशन? :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
कहिले हुन्छ कांग्रेसको महाधिवेशन?
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं,असार २३
नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको छ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार बसेको बैठकमा १४ बुँदा पेश गरेका छन् जसमध्ये १४ औं महाधिवेशन प्रक्रिया अन्तरिम संरचना गठनसँगै अघि बढाउने उल्लेख छ।
डेढ वर्षअघि भएको संघीय/प्रदेश निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकिन आठ महिना बाँकी छँदै सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी महाधिवेशनबारे छलफल गर्न तयार भएका छन्।
तर महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने अझै टुंगो छैन। सभापति देउवा र पार्टीमा छुट्टै समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच महाधिवेशनको मितिलाई लिएर सहमति बनिसकेको छैन।
दुवैका आआफ्नै प्राथामिकता छन्।
केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको प्रस्ताव नै लैजानुपर्ने अडान आइतबार पौडेल र सिटौला समूहले राखेका थिए। चार घण्टासम्म चलेको कोठे बैठकपछि केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनको एजेन्डा लिखित रूपमा लैजानसम्म देउवा सहमत भएका थिए।
सभापति देउवाले विधान अनुसारनै नै एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न खोजेको भन्दै पौडेल र सिटौला समूह सशंकित छ। त्यसैले उनीहरूले महाधिवेशनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न चाहेका हुन्।
वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि पेश भएकोले अब एक वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरिसक्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘पार्टी विधानअनुसार सबै तहमा अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्छ,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि कार्यतालिका नै बनाएर महाधिवेशनको तयारी थालिहाल्नुपर्छ। हामीसँग समय छैन।’
उनले महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका बनाउने बेला फेरि ‘झगडा’ पर्न सक्ने अनुमान गरे। ‘महाधिवेशनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न सभापतिजी बल्लबल्ल सकारात्मक देखिनुभयो,’ उनले भने, ‘अब अन्तरिम संरचना गठन, क्रियाशील सदस्य नवीकरण र वितरणका साथै कार्यतालिका पनि छिटो प्रकाशित गर्नुपर्छ।’
सभापति देउवाले कार्यकाल थप्न र महाधिवेशन पनि पछि धकल्न खोजेको संकेत गर्दै पौडेलले भने, ‘हामी छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। अरु महाधिवेशन टार्न, धकेल्न खोज्छन्।’
महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्नेबारे अहिल्यै बताउन नसकिने पौडेलको भनाइ छ। देशैभर संघीय संरचनाअनुसार संरचना गठन गरेपछि मात्रै महाधिवेशनको मिति तय गरिने उनले बताए।
‘अब एक वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘म अहिल्यै कहिले महाधिवेशन हुन्छ भन्न सक्दिनँ।'
उनले महाधिवेशनभन्दा पहिला नयाँ विधानअनुसार पार्टी संगठन बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए।
पार्टी सभापति देउवा नजिक केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल गौतम पनि अन्तरिम संगठन बनाएपछि महाधिवेशनको छलफलमा जुट्ने बताउँछिन्।
‘जति सक्यो छिटो पार्टी संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘अनि महाधिवेशनबारे मिति तय गरौंला।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडैलले महाधिवेशनको प्रक्रिया नै लामो र झन्झटिलो भएकोले सभापति देउवालाई कार्यकाल थप गर्न सहज भएको बताउँछन्।
‘सभापतिले महाधिवेशनबारे कुनै कुरा सुन्नै चाहनु हुन्थेन अहिले छलफल गर्न खोज्नुभयो यो नै राम्रो हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘महाधिवेशनको प्रक्रिया लामो छ। महाधिवेशन कहिले हुन्छ म अहिल्यै भन्न सक्दिनँ।’
उनले अन्तरिम संरचना बनाउन र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा कम्तीमा छ महिना समय लाग्ने बताए।
‘तलको संरचना नबनाएसम्म क्रियाशील नवीकरण र वितरण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘छिटो गर्दा डेढ वर्ष लाग्छ।’
नेतृत्वले महाधिवेशन छिटो गर्नेभन्दा पनि टार्न खोज्ने र समय धकेल्न खोजेको आरोप उनले लगाए। ‘एकातिर पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया पनि लामो छ भने अर्कोतिर नेतृत्व महाधिवेशन टार्न खोज्नेतर्फ छ,’ उनले भने।
उनले तत्काल अन्तरिम संरचना बनाउन र क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न पार्टीलाई सुझाव दिए। ‘अधिवेशन हुने वर्ष क्रियाशील सदस्यता विरतण गर्न विधानअनुसार मिल्दैन। तर हामीले भोटको हिसाब गरेर क्रियाशील सदस्यता अधिवेशनको मुखैमा बाँड्ने गरेका छौं, यो गलत हो,’ उनले भने।
उनले अहिल्यै कार्यतालिका प्रकाशित गरेर महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्ने बताए।
‘यही दिन महाधिवेशन गर्ने भनेर अहिले भन्न नसके पनि कम्तीमा महिना त तोकौं,’ उनले भने, ‘समय थौरै छ काम धेरै गर्नुपर्नेछ।’
पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने विधानअनुसार नै महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क छन्।
‘अन्तरिम संरचना गठनपछि कार्यतालिका निर्माण गर्छौं। विधानले भनेअनुसार नै महाधिवेशन हुन्छ समय थप लाग्दैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू हुनका लागि पहिले पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार अन्तरिम संरचना गठन गर्नुपर्ने बताए।
‘सात प्रदेशमा कार्यसमिति,१६५ वटा संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, ३३० प्रादेशिक क्षेत्र निर्वाचन समिति, ७५३ वटा पालिका समिति, ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यसमिति गठन पुस ७ अघि गरिसक्छौं,’ उनले भने।
अन्तरिम संरचना निर्माणको काम भदौदेखि सुरू हुने दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानबाट देशैभर एकैसाथ सुरू गर्ने र तेस्रो चरणको अभियान सुरू हुनुपूर्व (पुस ७ अघि) सिध्याउने बताए। ‘अन्तरिम संरचना निर्माणमा पार्टीभित्र विवाद छैन, सबैको सहमति भएकोले छिट्टै निर्माण गर्छौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार जागरण अभियानसँगै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण हुन्छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि वडादेखि प्रदेशसम्म संरचना बनिसक्नुपर्ने उनले बताए। क्रियाशील सदस्य वडा तहबाट पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्र आउने र अध्ययनपछि पुन: वडामा नाम पठाउने कांग्रेसको नियम छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २३, २०७६, १६:१२:००